Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Katara
Pejy 2 amin_ny 7
Tantara mikasika ny Katara
Qatar: Hazavana hafahafa teo ambonin'i Doha
Mpanoratra Amira Al Hussaini · Hehy
Nijery ny lanitry ny alina sady niezaka namantatra ireo hazavana nivezivezy hafahafa izay azon'ny bilaogera an-tsary tamin'ny findainy ireo bilaogera ao Qatar. Moa ve OVNI izany sa fiaramanidina, sa meteorita sa Spiderman?
Qatar: Adihevitra momba ny fametraham-pialan'ny filohan'ny foiben'ny fahalalahan'ny media
Mpanoratra Shabina Khatri · Fahalalahàna miteny
Noho ny fifandonana tamin'ny governemantan'i Qatar, niala tao amin'ny Foiben'ny Fahalalahan'ny Media ao Doha i Robert Ménard sy ny ekipany.
02 Jona 2018
Mpanoratra Suzanne Lehn · Amerika Avaratra
Arabeyes: Alahelo An'i Bhutto
Mpanoratra Amira Al Hussaini · Azia Atsimo
2007 - Tamim-pihetseham-po no nandraisan'ny tao Afovoany Atsinanana ny vaovao momba ny fahafatesan'ny Praiminisitra Benazir Bhutto. Tamim-pitandremana, fahatairana, fahatezerana ary fanekena ny tsy fisian'ny fanantenana ho an'ny taranak'olombelona no nanehoan'ireo bilaogera ny heviny.
08 Avrily 2018
Mpanoratra Mohamed Nanabhay · Hafanàm-po nomerika
05 Avrily 2018
Qatar: Nanova Ny Pasipaorony Ho Qatari Ilay Mpanakanto Indiana MF Husain
Mpanoratra Shabina Khatri · Azia Atsimo
Nahitana fahatafintohinana, fahatairana ary hafaliana ny fanehoan-kevitra tao amin'ny aterineto, satria notolorana ny zom-pirenena Qatari ary nanaiky izany i MF Husain, iray amin'ireo mpanakanto sady ankafizina indrindra no ankahalaina indrindra ao India.
14 Desambra 2017
Fantaro Ny Tontolon'ny Bilaogy Qatari
Mpanoratra Mohamed Nanabhay · Ady & Fifandirana
Namaritra ny fanjakana Qatar bitika kanefa manankarena ho "Firenena kely be fitiavana" ny mpitsangatsangana. Na dia famaritana tsy manam-paharoa aza izany dia mbola maro amin'ireo ao amin'ny faritra no mieritreritra an'i Qatar ho toy ny "firenena bitika manam-bava " satria manohana ara-bola sy mampiantrano ny AlJazeera izy.
Bahrain: Nahoana Ny Biraon'i Al Jazeera No Nakatona?
Mpanoratra Amira Al Hussaini · Bahrain
Nambaran'i Bahrain fa vonjimaika no nanakatonana ny biraon'ny Fantsona Al Jazeera Mandeha amin'ny Zanabolana noho ny "fanitsakitsahana ireo fifanarahana arak'asa". Mihetsika amin'ny fampiroboroboana ity lahatsoratra ity ireo mpitoraka bilaogy sy mpibitsika - indrindra fa taorian'ny tsaho niely fa nakatona ny foibe any Katàra noho ny tatitra navoakany momba ny fahantrana...
Tontolo Arabo: Nahoana No Mangina Ny Arabe Mandritra Ny Lalao Baolina Kitra
Mpanoratra Amira Al Hussaini · Afrika Atsimo
OIona an-tapitrisany manerantany no miraikitra eo amin'ny fahitalavitra, mijery ny lanonana fanokafana ny Fiadiana ny Amboara Erantany avy ao Afrika Atsimo- ary tsy hafa amin'izany ny zava-misy ao amin'ny tontolo Arabo.
28 Septambra 2017
Mpanoratra Abdullatif AlOmar · Koety